तपाईलाई थाहा छ ? यस्ता छन् प्याजका फाइदै फाइदा « Lokpath
२०७६, १२ मंसिर बिहीबार १२:४९
तपाईलाई थाहा छ ? यस्ता छन् प्याजका फाइदै फाइदा
प्रकाशित मिति : २०७६, १२ मंसिर बिहीबार १२:४९
काठमाडौं । प्याज हाम्रो भान्साको लागि नभई नहुने अत्यावश्यक तरकारी हो । हिजोआज नेपाली बजारमा प्याजको मुल्य अत्याधिक बढेको छ । जसले गर्दा सामाजिक संजालमा प्याजको बारेमा खुबै चर्चा पनि भइरहेको छ । कतै ट्रोल, त कतै व्यंग्यात्मक स्टाटस । प्याजको मुल्य अत्याधिक बढेपछि सर्वाधिक चर्चा हुन् थालेको हो ।
जब सूर्यदेवकी पुत्रीले आफ्नो स्वयंवरमा मण्डप उखेलेर फालिन्
काठमाडौं । शनिदेव आफ्नै बहिनी अर्थात् सूर्यदेव र देवी छायाकी पुत्री भद्रा सूर्यदेवकी